Monday September 03, 2018 - 17:16:31 in Wararka by Super Admin
Ciidamada shisheeye ee dalka gumeysiga ku jooga ayaa meelaha qar iskood uga guura halka meelaha qaarna xarakada mujaahidiinta alshabaab qori caaradii uga kiciso.
Dhawaan ciidamada shisheeye ayaa ka guuray garoonka kubadda cagta ee muqdisho staadiaam oo ka sokow ciyaaraha lagu qaba jiray munaasbadaha kale sida in ciidda lagu tukado in xiliyada dibad baxyada la isugu yimaado iyo wixii la mid ah.
Garoonka iyo nawaaxigiisa ayaa noqday kuwo qarmuun badan maadaama ciidamadu dhufeysyadooda iyo dhinacyadooda ku saxaroo jireen kuna kaadi jireen.
Bulshada deegaanka wuxay sheegayaan in ay ku farxeen shisheeyaha ka dul kacay maadama caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale ay u qabeen welow kuwo aan shisheeyaha dhaamin oo u daacad ah la wareegeen.
Shisheeyuhu waxay bahdileen madaxda dowladda federaalka ah maxaa yeelay markii ay baxayeen waxay u yeereen madaxweynaha federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuuna indhihiisa ku arkay nadaafad darada ka goobta ka jirta.
Urka garoonka ka imaanaya ayaa xaafadaha ka aga dhaw lala joogi la’yahay iska daa halka farmaajo la geeyay oo gudihiisa ahe waxaana suura gal ah in asiga iyo ra’iisalwasaaraha iyo xubno kale oo maalintii labaad tegay cuduro ka qaadaan.
Kadib guuritaankii ciidamada shisheeye oo degay deegano kale oo isla muqdisho ah Ra’iisalwasaare Xasan cali khayre ayaa qaatay xaaqin dheer wuxuuna bilaabay in uu geestiisa ka xaaqo qashinka iyo saxarada kale ee goobta karuurnaa.
Qaybaha kale duwan ee bulshada soomaaliyeed qaarkood oo u waramay idaacadda alfurqaan waxay sheegayaan in su xun loo bahdilay madaxda dowladda federaalka ah loona duleystay wax u harayna aanay jirin.
Aqoon yahan xasan oo ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye haysteen qalab ay wax ku nadiifayaan dhirtana ku guraan kaasoo marka ay meel degayaan ay adeegsadaan ayna awoodeen in ay garoonka sii nadiifyaan intaanay guurin laakiin ugu tala galeen arinkaan in ay madaxda federaalka ku sharaf dilaan.
Halkan ka dhageyso Warbixin Xasaasi ah MP3